Akụkọ - Na-eche nnukwu mkpa nke nde mmadụ 800 na Europe!
Iche nnukwu ọchịchọ nke nde mmadụ 800 na Europe!
Nnwale antigen nke COVID-19 nke ụlọ ọrụ China merie "Grand Slam" nke mba 15 gụnyere Germany, France, Italy na Portugal n'otu nzọụkwụ!
Ka ọ dị ugbu a, n'ihi mgbasa nke nje na-agbanwe agbanwe na ihe ndị ọzọ, ọrịa COIVD-19 na-agbasakwa n'ọtụtụ mba Europe. Ihe omuma banyere oria ojoo nke ndi ulo oru WHO nke Europe weputara na ubochi ole na ole gara aga gosiputara na oria ojoo nke Europe egosiputa ihe omuma doro anya nke nbibi n'izu ato.
N'okpuru mmetụta nke ọrịa ahụ, Europe, nke nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde 800, ebutela nnukwu ọchịchọ maka ngwaahịa nchọpụta antigen COVID-19. Ebe ọ bụ na nchọpụta antigen nwere ọnụ ụzọ dị mkpa, ngwaahịa na ndị nrụpụta agwakọtala ihe ọma na ihe ọjọọ. Na nzaghachi maka ọnụ ụzọ ala dị ala CE na ịdị mfe nke nkwupụta, ndị ministri ahụike ahụike Europe eguzobela usoro ahụike mba "whitelist" na ndabere a, na naanị ndị nrụpụta na ngwaahịa ndị agụnyere na "whitelist" nwere ike ịhapụ ịre ahịa na mba.
Na nzaghachi maka ihe a chọrọ, ndị nrụpụta China na-agbasi mbọ ike ka etinye ha na "whitelist" nke mba Europe. N'ime ha, New Gene (Hangzhou) Bioengineering Co., Ltd. (NEWGENE Bioengineering) abawanyela ma banye mba Europe niile nke nwere usoro "whitelist" ugbu a wee merie okpueze ọhụrụ nke European antigen nchọpụta whitelist nnukwu slam! Mba ndị a gụnyere Germany, France, Italy, Switzerland, Portugal, Czech Republic, Belgium, Hungary, Greece, Moldova, wdg. N'ime ha, ngwaahịa antigen nke NEWGENE agafeela nke ọma ule German PEI na nyocha Switzerland BAG, abụọ n'ime nyocha kachasị ọla edo nwere na Europe.
New Gene gafere nke ọma nyocha German PEI
New Gene gafere nke ọma nyocha Switzerland BAG
Banye na "whitelist" nke mba dị iche iche ma gafere nyocha ụlọ ọgwụ dị na mpaghara bụ ihe dị mkpa maka itinye akwụkwọ maka nnwale onwe nke antigen. Site na nnwere onwe zuru oke nke ngwa nyocha nke onwe n'ụlọ na mba EU, ngwaahịa nchọpụta antigen nke CGID-19 ga-anọ n'ọnọdụ dị mkpa na ahịa Europe.
Okwesiri ighota na na mgbakwunye na ahia Europe, NEWGENE emeela nhazi mbu na ahia South America na Afrika ma nweta ikike ikike mberede (EUA) na ikike mbubata site na mba dika Peru, Argentina, Ecuador, Kenya na Zimbabwe . N'ime ha, NEWGENE bụ ugbu a naanị akara njirimara China nke COVID-19 antigen na-achọpụta ngwaahịa ndị Ministry nke Health Kenya mara.
Ka ọ dị ugbu a, ọnọdụ nke igbochi ọrịa na mba ọzọ na-achịkwa ka siri ike. Maka ụlọ ọrụ ndị na-ahụ maka ihe ndị dị na China, ka ha jiri nkà na ụzụ kwado ọgụ a na-efe ọrịa ahụ, o webatawokwa ohere iji wuo mmetụta ndị si mba ofesi nke ụdị ndị China.
NEWGENE bụ ụlọ ọrụ na-eji nkà na ụzụ na-arụkọ ọrụ ọnụ nke ndị ọkachamara na-ahụ maka nkà na ụzụ na ụlọ ọrụ ahụ. Ọ bụ tumadi na-eme nnyocha na mmepe, mmepụta na ahịa nke ndu ngwaahịa. A na-etinye aka n'ịrụpụta ihe ndị sitere na ndu dị ka antigens na nje, na vitro diagnostic reagents na akụrụngwa metụtara, yana ọgụgụ isi-enyere aka nyocha. Nhazi usoro nke ụlọ ọrụ niile. Companylọ ọrụ ahụ enwetawo akụ na ụba nkwado dị ukwuu na usoro ahụike na ahụike nke ụlọ na nke mba ọzọ ma guzobe ọwa na-arụ ọrụ ogologo oge ma kwụsie ike n'ọtụtụ mba na Europe, Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia, Middle East, Africa, na South America. Ka ọ dị ugbu a, ebupụla ngwa ahịa nnwale CGID-19 nke mba NEWGENE karịrị mba 50 gburugburu ụwa. Ekwenyere m na ọtụtụ ụdị ndị China dị ka NEW GENE ga-arụ ọrụ dị mkpa n'inyere ụwa aka ịlụso ọrịa ahụ ọgụ!
German Ndebanye aha whitelist BfArM
Ajụjụ URL: https://antigentest.bfarm.de/ords/f?p=101/100:1422300666539::::&tz=8:00
French ndebanye aha whitelist
Ajụjụ URL: https://covid-19.sante.gouv.fr/tests
Ajụjụ URL: https://www.finddx.org/test-directory/?_manufacturer=new-gene-hangzhou-bioengineering-co-ltd&_region=asia&_country=china&_self_testingself_collection=no&_assay_target=antigen
.Tali ndebanye aha whitelist
Ajụjụ URL: http://www.salute.gov.it/interrogazioneDispositivi/RicercaDispositiviServlet?action=ACTION_MASCHERA
(dee New Gene na Denominazione fabbricante)
Onye Switzerland ndebanye aha whitelist
Ajụjụ URL: https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/medizin-und-forschung/heilmittel/covid-testung.html
Portugal ndebanye aha whitelist
Czech ndebanye aha whitelist
Onye Belgium ndebanye aha whitelist
Gris ndebanye aha whitelist
Asụsụ Hungary ndebanye aha whitelist
Argentina Bubata ikike
Peru Ikike Mberede (EUA)
Ekwedọọ debara aha.
Kenya Ikike Mberede (EUA)
Nke 1700, North Tianfu Avenue, Chengdu High-tech Mpaghara, Mpaghara Sichuan, China